Mmelite ohuru nke PUBG Mobile nwere map Sanhok na ọtụtụ ndị ọzọ | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo, PUBG Mobile, Nkuzi
Ọzọ ọhụrụ na okenye PUBG Mobile melite na-etinye anyị n’ihu map ọhụrụ: Sanhok. Maapụ oke ọhịa nke na-echetara anyị Vietnam ebe ndị agha US malitere agha n'amaghị ihe kpatara ya. Ya mere, gaa kwadebe maka maapụ dị iche karịa Miramar na Erangel, yabụ ọnọdụ dị iche iche ga-eme, na ọtụtụ, na ndị agha ahụ.
Ma ewezuga inwe a maapụ nwere pere mpe Dị ka okwu abụọ ahụ, anyị nwekwara ike iji echiche na ugbu a anyị nwere ike "ịdọrọ uche" na njị ọkụ ka igbe pụrụ iche daa na mpaghara anyị. Ma e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ka ọhụrụ akpaka égbè, ọzọ mgbakwunye maka ngwá agha na ụgbọala ọhụrụ: «Akwara Car»
1 "Nnọọ na ọhịa"
2 Egbe njali elu
3 Ngwá agha ọhụrụ na otu ụgbọala ọzọ
4 Ihe ndị ọzọ na PUBG Mobile
"Nnọọ na ọhịa"
Anyị nwere ike ọ fọrọ nke nta buputa egbe nke n Roses song ịbanye ozugbo na Sanhok, maapụ jupụtara n'oké ọhịa nke ndị nche ga-abụ ọkwa nke ụbọchị. Zọ ọzọ iji ghọta egwuregwu ahụ pụtara na PUBG Mobile nwere ụdị 0.8.0, dị mkpụmkpụ nke 0.7.0.
Maka oge a, Tencent Games ewepụtala ụgbọala na-adọkpụ iji mepee ọtịta maka oge mmelite na-ebudata mgbe ịmalite PUBG Mobile. Nke ahụ bụ, ọ ga-abụ okwu nke awa ma ọ bụ na nke kachasị echi, ị nwere ike nwelite site na otu onye ahia egwuregwu nke Tencent.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe nkiri vidio ahụ, a ga-enwekwa ohere na Sanhok maka ndị na-agba agba na oghere ndị ahụ mepere emepe mgbe anyị na-abịaru nso n'ụsọ oké osimiri, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ n'ime obodo ebe ihe ga-abụ frantic, na dị ka stealthy (karịsịa iji kwadebe ndị na-ezo).
Egbe njali elu
Ihe ọzọ kachasị ukwuu nke PUBG Mobile mbipute 0.8.0 bụ iwebata egbe egbe. Nke a ga - enwe nnukwu ọrụ na ọ bụ nwee ike “kpọkọta” igbe buru ibu nke ga-ejuputa nke ngwa agha kachasị mma. Mana o nwekwara nnukwu nkwarụ, ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-aga dị ka ndị nzuzu na ya, yabụ na ị ga-anọrịrị nke ọma na ndị otu gị iji nwee ike ichebe onwe gị n'aka ha niile.
Egbe na-enwu ọkụ ga-akpọ ọkpọ ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ime ebe a na-egwu egwu, ma ọ bụrụ na anyị nọ n'èzí, ọ ga-abụ bulletproof UAZ iji laghachi n'ụzọ kachasị mma. Usoro dị iche iche maka ihe ọhụrụ pụrụ iche nke a na-atụ anya inye ọtụtụ agha na egwu.
Ngwá agha ọhụrụ na otu ụgbọala ọzọ
Anyị nwekwara a égbè ọhụrụ na-akpaghị aka, na QBZ na-agbapụ 5.56mm mgboagha. Ọ nwere ma akpaka na otu mode. Agbakwunyela ngwa ọhụrụ maka cropped na mmelite ọhụrụ ahụ. Nke a ga-abụ ọrụ maka mbenata "ịgba" nke ngwa agha ahụ kwụ ọtọ ma na-abawanye ihu ala.
Ihe ọzọ kachasị ukwuu bụ ụgbọ ala ọzọ: ụgbọ ala akwara. Ọ nwere oche 4 ma nwee ụdị ntụgharị dị ka onye ọzọ "kpuchie." Yabụ n'ụdị ọhụụ anyị nwere ụgbọ ala ọhụrụ abụọ, akwara na UAZ nke pụtara n'igwe egbe.
Ihe ndị ọzọ na PUBG Mobile
Dịka ọ na-eme na mmelite PUBG Mobile, kwa ọnụ ọgụgụ dị mma nke atụmatụ ọhụrụ gụnyere nke pere mpe, obu ezie na ha na enwekari mmetuta ihe n’egwuregwu. Ndị a bụ:
Nnara ibu nwere ike ugbu a kpọmkwem si ntọala.
Mmezu: Agbakwunyela ole na ole. Enwere ike ịchọta ha n'okpuru "Ọrụ".
Ezigbo ego ezinụlọ: mgbe ha nwesịrị otu usoro (ma ọ bụ site na ịzụta ma ọ bụ obi ụtọ), usoro ahụ ga-akwụghachi ụfọdụ CU maka ndị egwuregwu ka ha wee nwee ike Ekekọrịta ya na ndị ọzọ so n’ezinụlọ gị.
Utu aha ndi obodo enwere ike itinye ya mgbe ịzụrụ.
Clan Rankings: A na-edepụta ezinụlọ ndị kachasị arụ ọrụ maka izu na oge.
Mgbochi aghụghọ- Aghọ Aghụghọ Ule ngwa mgbakwunye e mma na akụkọ bọtịnụ e kwukwara na-ekiri mode, isi ozi na-arụpụta.
na ihe nwere oke oge ugbu a enwere ike iwepu ha ozugbo maka isi BP (hooray!).
Ọrụ Ọganihu - A na-agbakwunye bọtịnụ niile iji nweta ụgwọ ọrụ niile site na njedebe ndị ọzọ.
Gbakwunyere ụdị ọrụ ọhụụ maka Royale Pass iji mee ka ọganihu ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ.
Ohere inweta igbe omimi mgbe egwuregwu gachara. A na-ahazi ihe ndị dị n’ime ya.
Oge oge ugbu a na-egosi oge niile ejije na data nke mmasị dị ka aha oge, ọkwa kachasị elu enwetara na ndị ọzọ.
Ndị ọzọ ndozi ugbua na egwuregwu:
Enwere ike wepu ndi enyi ugbua na oke.
Seendị 3D agbakwunyere n'ụgbọala na ihe ndozi ụgbọ elu ka a hụrụ na nlele na ụlọ ahịa ahụ.
Animation na oge page e kachasị maka ụfọdụ ụdị ngwaọrụ dị iche.
Enyi na mberede mberede ọkụ agaghị ahaziri.
El chat usoro e kachasị.
Enwere ike ịchọta ihe ndị nwere ike ịchọta na igbe ikuku.
N'ime obere akụkọ ahụ niile, anyị ji ogwe aka na-anabata usoro ikpo ọkụ ma na ugbu a, anyị nwere ike ịgbanwe oge maka ihe BP. A ọhụrụ PUBG Mobile melite na-eweta map Sanhok ọhụrụ na ndị niile ọhụrụ kwuru sị enwe!
[Emelitere] Inwere ike ibudata PUBG Mobile APK gaa na mbipute 0.8.0. Mgbe ịmalite egwuregwu ahụ, ihe nwelite nke fọdụrụ ga - ebudata (ọ nwere ike were 10-30 nkeji).
Budata ngwa ahụ: PUBG Mobile 0.8.0
Echefukwala ịgafe ntuziaka ndị a na mara 5 aghụghọ nke mbipute 0.7.0ma onye a bụrụ ihe ọkpụkpọ ka mma na PUBG Mobile, Dị Oké Mkpa!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » PUBG Mobile » [APK] Download ugbu a mmelite nke PUBG Mobile na map ọhụrụ 'Sanhok', egbe egbe na ọtụtụ ndị ọzọ
Igwefoto Galaxy Note 9 bụ nke abụọ kachasị mma na ahịa dị ka DxOMark si kwuo